तपाईले गिरीजा बाबूको आत्मब्रितान्त पक्कै पनि पढीरहनु भएको छ होला। कति गर्बका साथ उहां आफ्नो गैरकानूनी अतितको बर्णन् गरिरहनु भएको छ। यो कुनै जेल तोडेको कथा होइन। यो कुनै भिडन्तको बिबरण होइन। खान नपाएर रिक्सा चलाउन परेको, मजदूरी गर्न परेको कथा पनि होइन।यो कथा त जाली नोट छापेको कथा हो। कमिशन को लागि तस्करको सुन् भरिया बनेको कथा हो। हुंदा हुंदा उहाँ युरेनियम इज्राएल तस्करी गर्ने कार्यमा पनि संलग्न हुन खोज्नु भएछ। धन्न, बीपीले उंहालाई रोक्नु हुंदो रहेछ। "र" को मिलेमतोमा त्यत्रो बिमान अपहरणको योजना बन्दा समेत बीपीलाई सुंइको हुंदो रहेनछ।
क्रान्तीको लागि निस्चित रुपमा अर्थको जरुरत् पर्छ नै। तर यहि हो त क्रान्तीको लागि अर्थ संकलन् गर्ने तरिका? फेरि त्यस्ता तस्करहरु संग कसरी संगत भएको हो? सुनेको थिएं, ढुन्डीराज शास्त्रीको काम नै बनारसबाट जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउने र बेच्ने थियो। पछि उनी नै शिक्षा मन्त्री पनि बने क्यारे। प्रजातान्त्रीक् आन्दोलनको जग यस्तै अपराधले बनेको हुन्छ?
गिरिजा बाबूको त्यस्तो उपद्रोले गर्दा नै बीपीले दिक्क भएर भन्नु भएको होला-यो हवल्दार हो भनेर।
यो दूर्भाग्य हो की देश् अहिले देश तिनै हवलदारको कमान्डमा चलेको छ।
युरेनियम् जस्तो सम्बेदनशील पद्धार्थ, बीपीको संबन्ध दूरुप्रयोग् गरेर इज्राएल पठाउन खोज्ने आंट गर्ने कहांसम्मका उधुम मान्छे रहेछन् त यिनी। यस्ता ब्यक्तिले राज गरेको देशमा कसरी भ्रष्टाचार कम् हुन्छ? कसरी तस्करी रोकिन्छ? उल्टो खुम् बहादुर जस्ता ब्यक्ति दाङको बिश्व बिध्यालय शभामा बिशिस्ट ब्यक्तिको रुपमा नियुक्त भएका छन्।
"र" को सहयोगमा नेपालको बिमान अपहरण गरेको कुरा बताएर यिनले यो कुरा खुलस्त पारेका छन कि "र" का सबै भन्दा ठूला नोकर यिनै हुन। यस्ता बाट नेपाली राष्ट्रियता कसरी जोगिन्छ? भारतीय पक्षबाट संधै नेपाली भूभाग अतिक्रमण हुंदा, नेपाली जनता धपिंदा यिनलाई कुनै पिडा हुंदैन। पिडा कसरी होस्-"र" ले बिमान अपहरण गर्न सघाएर यिनलाई जो अपार गुण लगाएको छ। सायद त्यो बिमान अपहरण पछि यिनलाई कहिले पनि तेस्रो दर्जाको डिब्बामा कहिले यात्रा गर्न परेन।
कोइराला परिवारको अहिलेको श्रीसम्पत्ती सायद त्यही बिमान अपहरणको आम्दानीको फल त होइन? नेपाली कांग्रेसको इमान्दार कार्यकर्ताले त्यसको हिसाब किताब माग्नु भएको छ?
गिरीजाको आत्म ब्रितान्त पढन नेपाल साप्ताहीक हेर्नु होला।
Posted by: Postak_Shrestha Labels: समसामयिक विश्लेषण
त्यसो त म पहिला पनि गिरिजा कोईराल वा कुनै दलका नेताको प्रशंसक कहिल्यै थिईन,।
झन यो आत्मकथा पढे पछि त म यि व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा आदर दिन सक्ने स्थितिमा छैन ।
के विचार गरेर यो आत्मकथा प्रकाशीत भै रहेको छ मलाई थाहा छैन। शायद यी सब अपराधलाई "बहादुरी" ठानेर उहाँ यसलाई बढाई चढाई बखान गर्दै हुनुहुन्छ तर मेरो बिचारमा यो पुरै "अपराध कथा" हो ।
शायद वहा नेपाली जनतालाई दुनुया कै सबैभन्दा बेबकूफ प्राणी ठान्नुहुनछ र त्यसैले यी तस्कर र अपराधि संगका सम्बन्धलाई "गौरव" ठान्नुहुन्छ । तर अहिलेका नेपाली जनता वहाकै स्तरले सोचेजस्तो पटमुर्ख पक्कै छैनन। । नेलशन मण्डेला, गान्धि र अब्राहम लिंकन जस्ता नेताको चरित्रमा समेत यदा कदा "औला उठने" समयमा गिरिजाको यो आत्मकथा कुनै सम्मानजनक यथार्थ भने हुदै होईन ।
अन्तमा गिरिजा एक्लै गिर्नु भएको भए मेरोलागि त्यो चासोको बिषय नहुन सक्थ्यो तर देश हाल यीनै "महामानव" को हातमा छ र यिनले आफूसंगै देशलाई पनि अधोगतिमा पुर्‍याउलान भन्ने मात्रै मेरो त्रास हो ।
नाम गिरीजा भए नि काम सधै तिनीको माथीजा हुन्छ। कहिले पदमा माथी पुग्छन त कहिले पत्रीकामा। कुरो त्यती हो। अहिले छोरीलाइ मन्त्री बनाएर फेरी पत्रिकामा माथी पुगेका छन। बाउ छोरी मन्त्रीहुने गिनिज बुकमा नाम लेखे हुदैन ? धन्न छन प्रभू, नया कुरा गर्न कती सिपालु नेपालका नेताहरु।